Ukraine ayaa noqotay midka ugu wanaagsan Yurub ee dhoofinta walnut
Liiska liistada dhoofinta walnut ee Yurub, Ukraine hadda waxay ku jirtaa booska hogaanka sare waxaana ay ku jirtaa kaalinta 5aad ee liiska ugu sareeya 5 ee soo saarayaasha sheygan ee adduunka. Hase ahaatee weli waxaa jira arrimo ka mid ah qaab-dhismeedka dambe ee laanta iyo dhoofinta. Arrimahaas ayaa waxaa looga dooday intii lagu jiray shirkii Wasiir-kuxigeenka Siyaasadda beeraha iyo Cuntada Ukraine ee ku saabsan isdhexgalka Yurub, Olga Trofimtseva, oo wakiil ka ah NGO-ga "Ukrainian Nut Association".
Sida loo wajaho cudurada iyo cayayaanka ee walnut
Walnut - si ballaaran loo qaybiyay aagagga magaalooyinka. Miraha ayeey ku badan tahay kalooriyeyaasha iyo caafimaadkooda. Qiyaastii dhammaan qaybaha geedka - caleemaha, xididdada, jilif - ayadoo ay ugu wacan tahay fitamiinada iyo macdanta ay leeyihiin bogsashada guryaha. Waxaa loo adeegsadaa daawada dhaqameedka iyo dhaqanka, kiknoolojiyada. Walnut iyo lowska lowska waa marti joogta ah miisaska jikada ee suxuunta kala duwan.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada walxaha, isticmaalka daawada iyo kiknoolajiyada
Walnut waxaa loo isticmaalaa qurxinta quruumaha badan. Noocyada codka ee walnut waa mid ballaadhan - waxaa lagu daraa macmacaanka, saladhka, bakeeryarada, hilibka, kalluunka iyo koorsooyinka koowaad. Dhammaan sababtoo ah waa ilo badan oo fitamiino ah waana mid aad u faa'iido leh jirka bini'aadamka. Qodobkan, waxaan kuu sheegi doonnaa faa'iidooyinka laga helayo walxaha iyo dhibaatada ay keeni karaan.
Dad badan oo naga mid ah waxay jecel yihiin in ay cunaan walxaha. Midhaha Tani waxay muddo dheer caan ku ahayd qayb ka mid ah fitamiinada iyo nafaqooyinka. Maanta waxaa jira noocyo badan oo ah walnut. Waxay leeyihiin sifooyin gaar ah, dhadhan, tilmaamo kala duwan oo dhalid ah. Waxaan ku siinaynaa si aad u ogaato noocyada ugu fiican ee ku habboon koritaanka dalka.
Wanaajinta guryaha sifaha walnut
Ma aha qarsoodi ah in walnut yahay warshad aad u faa'iido leh. Dad badan ayaa jecel inay cunaan cunnooyinka dhadhan fiican, isla mar ahaantaana, foorarinta lowska, qolofka si fudud ayaa loo tuuraa. Iyo si aan micne lahayn, maxaa yeelay sidoo kale waa wax soo saarka waxtar leh. Waxaad baran doontaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qolofta walnut iyo guryaha bogsoodka ah ee dambe ee qodobkan.
Qalabaynta iyo kaydinta walxaha guriga
Qalajinta iyo kaydinta walxaha ayaa ah qodob muhim ah si loo ilaaliyo tayada xawaaraha, taas oo saameeysa qiimaha badeecadaha ee mustaqbalka. Maqaalkani waxaan ku ogaan doonaa sida loo qalajiyo walxaha gudaha ee siyaabo kala duwan iyo guriga, iyo sidoo kale tixgelinta dhammaan waxyaalihii kaydinta alaabta ceeriin ee la diyaariyey.
Isticmaalka walnut cagaaran sida dawo
In yar oo si buuxda u ogaato faa'iidooyinka walnut, inkasta oo sifooyinkiisa bogsiinta loo yaqaan tan iyo wakhtiyadii hore. Warshadan aan qabin waxa laga helaa dalalka Aasiya, ee ku yaalla Caucasus, oo ay heli karaan dadka deggan Greece iyo Ukraine. Maqaalka waxaan eegeynaa qiimaha nafaqada ee walwalka, wax ka barto faa'iidadiisa, falanqee cuntooyinka loogu talagalay diyaarinta iyo isticmaalka tinctures bogsashada.
Faa'iidooyinka huurka ee jidhka nin
Walnut ama, sidoo kale waxaa loogu yeeraa, walxaha boqortooyada oo ka yimaada Balkanka, laakiin maanta joqraafiyadu waa mid aad u ballaaran. Miro ayaa si gaar ah loogu sharfay Maraykanka, Shiinaha iyo Bartamaha Aasiya. Waxaa jira dhowr sababood oo tan: waxay leedahay saameyn aad u weyn xagga dhaqdhaqaaqa maskaxda, hagaajineysa shaqada wadnaha, horumarinta xusuusta, waxay gacan ka geysataa dhisidda murqaha.
Saliidda Walnut: Waa maxay faa'iido leh iyo muxuucyada, ee aan la isticmaali karin, sida loo isticmaalo ujeedooyinka muusikada iyo daawooyinka
Walnut qaybinta adduunka oo dhan waxay ka bilaabantaa gobollada Cafcasus iyo Central Aasiya. Miro ayaa loo yaqaanay Giriiggii hore iyo Roomaanka. Waqtiga fog, lowska waxaa loo tixgeliyaa miro siinaya xigmad, saliideeduna waxay ahayd xarun dhamaan sifooyinka wanaagsan. Maqalku wuxuu tixgelin doonaa halbeegga, faa'iidooyinka iyo sifooyinka saliidda ee miro.
Maxay yihiin qaybaha kala duwan ee walnut?
Guryaha bogsashada ee walxaha ayaa loo yaqaan dad badan. Cunnadooda dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh ayaa loo isticmaalaa nafaqada iyo caafimaadka nafaqada. Saliidda Walnut waa qayb ka mid ah suxuunta badan waxaana loo isticmaalaa kondomoole. Kabaha cufan ee miraha kuwan waxaa loo isticmaalaa sameynta daawooyinka dhaqameed. Dad yar ayaa og in qaybaha kala duwan ee kala sooca nucleoli ay sidoo kale faa'iido leh.
Dad badani waxay cunaan cunnooyinka cuntooyinka sababtoo ah dhadhanka iyo nafaqada, laakiin cid kastaa way ogyihiin sida ay u dhaqmaan jirka haweenka. Qodobkani waxa aanu tixgelineynaa ka kooban halbeegga, heerka maalinlaha ah ee isticmaalka, faa'iidooyinka haweenka, iyo sidoo kale sifooyinka daawooyinka ee sheygan. Waxyaabaha ay ka kooban tahay walxaha walxaha ma aha oo kaliya dhadhan fiican, waxay sidoo kale hodan ku yihiin fiitamiinada, yaryar iyo macro-macmacaan kuwaas oo faa'iido u leh jirka, taas oo lagu faahfaahin doono faahfaahin dheeraad ah.
Sida loo gooyo geed ka soo miraha walnut
Dad tiro yar ayaa og in si ay u koraan walnut ee dalka ma aha lagama maarmaan in la helo seedling - waa ku filan si ay u midhooto geedkii si sax ah. Si aad u ogaatid sida loo sameeyo tan, akhri waxyaalahayaga. Xulashada walxaha beerashada Haddii habka koritaanka geedku uu ku guulaysanayo uu ku guulaysto wuxuu ku xirnaan doonaa xulashada wax soo saarka tayada.
Honey iyo walnuts: Waa maxay macmacaanka loogu talagalay isku darka wax yaab leh?
Maanta, waxaa jira daawooyin badan oo lagu hagaajinayo difaac, ka hortagga hargabka. Laakiin dhammaantood waxaa laga sameeyey kiimiko kala duwan, taas oo ah, waa daawo macmal ah. Haddii aad raadinayso bedelaad daawooyinka farmashiyaha oo aad rabto in aad isticmaasho alaabta dabiiciga ah oo keliya, u fiirso walnuts malab, oo aad wax badan ka baran karto maqaalkan.